Maxuu salka ku hayaa safarka aan lasii shaacin ee Deni ku aaday Jabuuti? – Hornafrik Media Network
Madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Deni, ayaa maanta safar aan lasii shaacin markii u horraysay ugu amba-baxay dalka Jibuuti, tan iyo markii loo doortay madaxweynaha maamulka Puntland.
In kastoo madaxtooyada Puntland aysan war ka soo saarin safarka madaxweyne Deni, hada ilo xog ogaal ah ayaan kasoo xiganeynaa in uu la xiriiro marti-qaad madaxweyne Deni uu ka helay madaxweynaha dalka Jibuuti Ismaaciil Cumar Geelle.
Sidoo kale xubnaha noo waramay waxa ay sheegeen in Madaxweyne Deni iyo Madaxweyne Ismaaciil ay sameynayaan iskaashi cusub oo Puntland iyo Jabuuti ka dhaxeyn doona, waxaana arintaas kasoo shaqeeyey Taliyaha ciidamada Mareykanka ee qaaradda Afrika Gen. Stephen J. Townsend, si ay sheegeyso xogta aan ka helnay safarkaas.
Sidoo kale Gen. Townsend ayaa sida wararku sheegayaan madaxweyne Deni uu kala hadlay, in Taliska AFRICOM oo saldhigiisu yahay dalka Jabuuti lasoo dejiyo magaalada Boosaaso, si loo xoojiyo la-dagaallanka kooxaha kasoo hor jeeda dowladda Soomaaliya.